Ikhaya » izithuba » Iindaba zokuHamba » Amanani aphezulu ehotele e-Eid
Amanani aphezulu ehotele e-Eid
Julayi 5, 2012
ISINGAPORE -Agoda.com, indawo yokubhukisha ehotele ehamba phambili e-Asia kunye nenxalenye yeqela le-Priceline ye-Nasdaq (i-Nasdaq: i-PCLN), namhlanje ibhengeze ezinye iihotele ezikwi-Eid, ezikalwe ngabathengi be-Agoda.com.
Ngokusondela ngokukhawuleza kweRamadan, abahambi baceba ukubaleka malunga ne-Eid ul-Fitr- ewela ngeCawa, nge-19 ka-Agasti kulo nyaka-kufuneka babhukishe ihotele yabo kungekudala. Njengexesha eliphakamileyo lokuhamba ngaphakathi kwe-Asia-mpuma ye-Asia, iihotele zigcwalisa ngokukhawuleza, ngakumbi ezo zineevenkile ezinkulu ezinikezela nge-notch ephezulu yeHalal kunye nee-buffets ezingenayo inyama yehagu.
Izinto zeAgoda.com ngaphezulu kwezigidi ezi-2 zokuphononongwa kwehotele yokwenyani, ebhalwe ngabathengi abaye bahlala kuloo hotele. Ngokusekwe kumanqanaba kunye neengcebiso ezivela kwaba bahambi, oku kulandelayo luluhlu lweehotele ezikumgangatho ophezulu kwiindawo eziphambili zoMzantsi-mpuma weAsia ezibonelela ngokutya okulungele isidlo se-Eid ul-Fitr, kuluhlu lweendawo zokutya ezahlukeneyo.
I-AGODA.COM EPHAKAMILEYO IHLALA I-EID UL-FITR
Ihotele i-Shangri-La, eKuala Lumpur 5*
I-Shangri-La ithandwa ngabathengi be-Agoda.com ngamagumbi ayo obutofotofo, indawo ekumbindi wesixeko kufutshane nePetronas Towers, kwaye, ewe, kukutya kwayo. Indawo yokutya isidlo sakusasa idunyiswa ngokukodwa, inika ukusasazeka okunesisa okuba ngeempelaveki kutsala abantu balapha, kunye neendwendwe ezivela kwezinye iihotele. Zonke iindawo zokutyela ezikwiindawo zokutyela- iJapan iZinpangu, iTshayina Shan, g kunye neFrench Lafite- nazo zibonelela ngokutya okumnandi kakhulu.
Uphengululo lwabathengi lweagoda.com: “Nangona bekukho iindwendwe ezininzi ehotele, sihleli ngoko nangoko kwitafile yethu yokutya isidlo sakusasa- ngokuqinisekileyo yenye yezona zinto zibalaseleyo ebesinazo.” -UMikha J., kwiiPhilippines
** Ikhethekileyo-yeentaka ezikhethekileyo ukusuka kwi-US $ 120 ngobusuku kwigumbi lokumkani wase-Deluxe. Izinga elingabuyiswayo.
Ezi zibini zitshatileyo zibuyela umva zibonelela ngeendawo zokuhlala zabucala ezili-12 kwindawo egadiweyo, uhambo lwemizuzu emi-5 ukusuka kulwandle lwasePantai Tengah. Ipropathi ivumela kuphela iindwendwe ezineminyaka eli-18 nangaphezulu, ke abahambi abafuna ukuzola ngeli xesha leholide lixakekileyo banokukujonga njengokubaleka okwenyani. Ipropathi ibandakanya iivenkile zokutyela ezi-2 -i-Itali enye, i-Indiya enye-kunye neMolek Café, esebenzela ukutya okwenyani kweMalaysian. Kukwakho noluhlu lweendawo zokutyela ezahlukeneyo kunye neefestile kumgama wokuhamba weholide. Isidlo sakusasa simahla senzelwe zonke iindwendwe.
Uphononongo lwabathengi lwe-agoda.com: "Ukubaleka ngokugqibeleleyo kwezithandani-kuyacetyiswa kakhulu, ngokuqinisekileyo siza kubuya!" -USamsurin W., waseMalaysia
** I-Studio Villa esuka kwi-US $ 145 ngobusuku bonke - Idili eshushu ibandakanya iipesenti ezingama-20. Izinga elingabuyiswayo. I-Wi-Fi yasimahla.
G Ihotele, iPenang 5*
Le propati yanamhlanje ye-chic ecaleni kweGurney Drive isondele ekuthengeni, ibekwe kakuhle kumashishini nakwabahambi bokuzonwabisa, kunye nokutya okuninzi okukhethiweyo. Ihotele ikufutshane nevenkile enokhetho olubanzi lweendawo zokutya, kwaye ngaphakathi kwepropathi ngokwayo kukho ukutya kunye nokusela imixholo kunye nezinto ezikhethekileyo, kubandakanya iberbuka puasa buffet yeendwendwe ezihlala eRamadan. Iivenkile zokutyela zeSoy + Sesame zibonelela nge-pan-Asia cuisine, kunye ne-buffet yasebusuku yangoMgqibelo. Kukho iindawo zokutyela zaseJapan nezaseNtaliyane kwisiza.
Uphengululo lwabathengi lweagoda.com: “Ngaphandle kwehotele kukho iGurney Plaza enokutya okuninzi kunye nokuthenga. Igumbi lokulala lijonge elwandle kwaye linembonakalo entle. -U-Evelyn T., wase-Singapore
** Amaxabiso asuka kwi-US $ 188 ngobusuku. I-Wi-Fi yasimahla.
Irayay Village Resort kunye ne-Spa Krabi, Thailand 4*
Le ndawo yokuphumla yeebungalows ezimnandi ilele kwindawo entle yoLwandle lwaseRayay kwiPhondo laseKrabi, kwimizuzu engama-30 ukusuka eKrabi Town. Isitimela sihleli peninsula ezolileyo kufutshane ne-Ao Nang yabakhenkethi, kunye nembono yakudala yaseThai malunga nokwakheka kwelitye lekhephe kunye nezikhephe ezide. Isondele ngokwaneleyo ukuba ingathatha inxaxheba kulo msebenzi, kodwa ikude ngokwaneleyo ukuba ingakonwabela iholide. Irayay Village Resort kunye ne-Spa zibonelela ngokutya kwaselwandle okufreshi okuhlala kwalapha, kunye nokutya kwaseThai naseNtshona. Ipropathi iqinisekisiwe ngeHalal yiOfisi yeKomiti yamaSilamsi yaseThailand.
Uphengululo lwabathengi lweagoda.com: "Sinegumbi elihle kakhulu elinephuli ekufuphi kwigumbi lethu, kwaye ukutya kumnandi kakhulu - ukutya kwesiThai - nolwandle olunentlabathi." -I-Noor Z., eMalaysia
** Iirhafu zembonakalo yedama le-deluxe ukusuka kwi-US $ 90-incwadi ngoku ngeepesenti ezingama-25, isidlo sakusasa sibandakanyiwe.
Ihotele yeNuovo City, Bangkok 4*
Kumgama wokuhamba kwezona ndawo zibalulekileyo zabakhenkethi, kubandakanya iGrand Palace, iGolden Mountain Temple, kunye neWat Po, iNuovo City Hotel yeyona ilungele abahambi abanomdla wokujonga inkcubeko nembali yaseThai. Le propati yale mihla yeyamaSilamsi - ayinasiselo sotywala kunye neHalal eqinisekisiweyo- kodwa kukuphosa ilitye kwiindawo ezininzi zokutyela ezikwiSoyi Rambutree kunye neNdlela ye-Khao San, ebonelela ngokuthenga, ukuthambisa, kunye noluhlu olupheleleyo lwemini nobusuku ukuzonwabisa.
Ukuphononongwa kwabathengi nge-agoda.com: “Ihotele icocekile kakhulu, inomoya kwaye ikrelekrele ngeYurophu, vibe yanamhlanje ngayo. Igumbi lesidlo sakusasa yindawo eyamkelekileyo, enesidlo sakusasa esimnandi esinokhetho oluninzi, kuba besifuna ukutya kwamaSilamsi. Igumbi licocekile kwaye lihle - ngekhe ubuze ezinye. ”
** Amaxabiso asuka kwi-US $ 63 ngobusuku kwigumbi le-deluxe ngesidlo sakusasa-kubandakanya isaphulelo seepesenti ezingama-20!
IQela lehotele laseRoyal Cliff, ePattaya
Ibekwe elunxwemeni lwase Pattaya, iRoyal Cliff Hotels Group ephumelele amabhaso ibonelela ngendawo yokuphumla, kwimizuzu engama-90 kuphela ukusuka eBangkok. Ilungele iiholide zosapho, ikwindawo ezolileyo, ukuqhuba okufutshane ukusuka kumbindi wePattaya kunye nokuHamba kwesitalato. Zine iiholide kule ndawo inkulu, nganye inesipho esahlukileyo, nangona besabelana ngazo zonke iindawo zokuzonwabisa: ama-4 amadama okubhukuda (ama-5 agcinelwe iindwendwe zeRoyal Wing Suite), iinkundla zentenetya, iiklasi zokupheka zaseThai, ukufaneleka, i-spa, igadi yetropiki. ngomkhondo wokubaleka, ibala legalufa elinemingxuma eli-2, kunye nebala lokudlala labantwana kunye neenkonzo zokukhathalela abantwana. Zili-18 iivenkile zokutyela apha, iMaharani- uKumkanikazi weIndiya yaseIndiya, unekhitshi eliqinisekisiweyo leHalal.
Uphengululo lwabathengi lwe-agoda.com: “Ihotele intle kakhulu, ayisweli nto ngokweenkonzo, kwaye intengiso entle… indawo [izolile] inephuli entle kakhulu.” -Hussein L., iJordani
** Amaxabiso asuka kwi-US $ 100 ngobusuku kwindawo encinci yolwandle.
IRoyal Plaza kwihotele iScotts 5*
Malunga nekona ukusuka kwi-Orchard Road yokuthenga, iRoyal Plaza eScotts Hotel ibonelela ngeebhothi zaseAsia naseMeditera ezilungiselelwe ikhitshi eliqinisekisiweyo leHalal. Amagumbi kunye nezindlu zamandulo ziyilo lwanamhlanje kwaye kukho izixhobo zeshishini ezixhotyiswe kakuhle kwindawo yabahambi abalawulayo, kunye negumbi lokuphumla le-Intanethi leeyure ezingama-24 kwabo bathanda ukuhlala bedibene ubusuku nemini. Kukwakhona neziko lokomelela komzimba kunye nephuli yangaphandle.
Uphengululo lwabathengi lweagoda.com: “Ihotele ibekwe kude neNewton Circus kufutshane neziko elidumileyo labathengisi. Uluhlu olubanzi lokutya okumnandi lunomtsalane kubatyeleli baseSingapore, nakubantu balapha. ”
** Amaxabiso asuka kwi-US $ 178 ngobusuku kwigumbi le-Deluxe elinasimahla kwi-Intanethi kunye ne-minibar-inqanaba leentaka zakuqala libandakanya isaphulelo sama-35 eepesenti. Izinga elingabuyiswayo.
Umkhulu iHyatt Singapore 5*
Ibekwe ngokugqibeleleyo kwikona ukusuka kwi-Orchard Road shopping strip, iGrand Hyatt ihambisa yonke into elindelekileyo yohlobo lweenkwenkwezi ezi-5, ezinamagumbi anamhlanje axhotyiswe kakuhle kunye ne-spa ye-Damai. Ihotele ineendawo zokutya neziselo ezisixhenxe, kubandakanya neStraits Kitchen, etya isidlo sangokuhlwa esinevumba elimnandi eliphefumlelwe kukutya okwahlukeneyo kwezitrato zaseSingapore, ezilungiswe kwindawo yokuphekela evulekileyo eHalal.
Uphengululo lwabathengi lweagoda.com: “Indawo yayigqibelele, isidlo sangokuhlwa senkonzo yasekamelweni sasibalasele. Kwakumnandi ngokwenene ukubuyela kwigumbi lehotele elinobunewunewu ngexesha losuku olutshisayo. Isidlo sakusasa kwiClub Lounge sikhethe kakuhle. ” -I-Siti S., i-Indonesia
** Amaxabiso asuka kwi-US $ 305 ngobusuku kwigumbi lokumkani elikhulu.
Ifumaneka kwindawo ebengezelayo yaseMarina Bay, kufutshane neRaffles City, ihotele iFairmont ibonelela ngendawo yokuhlala yanamhlanje kwenye yezona ndawo zintle zaseSingapore. Iimbono ezivela kwimigangatho ephezulu zibonisa izibuko kunye nesibhakabhaka esibhakabhakeni, ngelixa amagumbi ebonelela ngendawo yangoku ezolileyo yeendwendwe. Kwababini abaxabisa ukuhlala ngokuzolileyo, iClub Lounge igcinelwe iindwendwe ezingaphezulu kweminyaka eli-12 ubudala, kwaye kukho iWillow Stream Spa - enye yezona spa zikhulu zokuthoba eAsia - zonyango olunzulu. Ipropathi inikezela ngeendawo ezili-15 ezahlukeneyo ze-F & B, i-Asia Market Café ehambisa ukutya okumnandi kwe-pan-Asia izitya ezivela kwikhitshi labo eliqinisekisiweyo likaHalal.
Uphengululo lwabathengi lweagoda.com: “Indawo entle - iRaffles ingaphesheya kwendlela, kunye nendawo yokuthenga entle ngaphantsi, kubandakanya ivenkile enkulu, indlela ehamba ngaphantsi komhlaba kunye nenkundla yokutya. Zenzele inceba kwaye ujoyine iKlabhu yokuLawula xa ungena. Ngexabiso elincinci unokufumana isidlo sakusasa, isidlo sasemini kunye nesidlo sangokuhlwa, kubandakanya neziselo, imini yonke. Ukuba ujoyina iKlabhu kaMongameli (akukho ntlawulo) ufumana ukufikelela simahla kwiWiFi. ” -UJennifer D., Australia
** Amaxabiso egumbi le-Deluxe ukusuka kwi-US $ 275 ngobusuku. Ireyithi ibandakanya isaphulelo seepesenti ezili-10 - esingabuyiswayo.
Ngolwazi oluthe kratya malunga ne-agoda.com okanye ukufumana ezona mpawu zintsha kunye neendaba, qhagamshela ku- facebook.com/agoda.